Maxaad kala socotaa Labada WAJI ee Luis Suarez!!????? – Gool FM
(Spain) 07 Nof 2018. Barcelona ayaa xalay u soo gudubtay wareega 16-ka Champions League kaddib markii ay xalay bar baro 1-1 la gashay kooxda Inter Milan, laakiin Luis Suarez wax gool ah ma dhalin taa oo ka dhigan inuu wax gool ah dhalin la’yahay 1,418-daqiiqo kulamada Europe uu ku soo ciyaaray bannaanka (Away).
Markii ugu dambeysay uu Barcelon gool u dhaliyo Champions League kulan bannaanka ah waxay ahad bishii September 2015.
Suarez oo ku guuleystay gool dhalinta La Liga ee 2015/16 ayaa sidoo kale iminka sagaal gool ku hogaminaya gool dhalinta kal ciyaareedkan waxaana taa u dheer inuu labo kulan ku dhaliyay Shan gool.
Dhaliyaha reer Uruguay waa Libaax markuu ka ciyaarayo La Liga balse wuxuu u muuqdaa Bisad kulamada Yurub.
Kulankii xalay dhaliyahii hore ee Liverpool ayaa sameeyay 9 Shot/Laad laakiin wuxuu kubbada daba marin waayay goolhaye Samir Handanovic, wuxuuna soo bar bareeyay Rikoodhka laacibkii hore ee Barcelona Ronaldinho kaa oo sidan oo kale 9-laad gool ku dhalin waayay Finalkii ka dhacay Paris 2006.
"Christian Eriksen wuxuu u dhaqaaqi doonaa Real Madrid ama Barcelona.".-Danny Murphy
“Jürgen Klopp wuxuu bad baadiyay mustaqbalkeyga kooxda Liverpool” - Roberto Firmino